1. Banyere ụdị mmiri mmiri Iji igwe eji eme ihe, ikuku mmiri ndị ọzọ ga-akwado ụlọ ọrụ ahụ. 2. Condensate ọnọdụ mmiri Ikuku abịakọrọ na condensed mmiri ga-abụ ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke pneumatic mmiri. Tupu nyo, a ...
1. Achọrọ ikuku dị mkpa maka iji ya mee ihe: ikuku dị ọcha na nke akọrọ ga-eji. Na ikuku agaghị enwe mmanụ ihe mgbaze sịntetik, nnu, gas na-emebi emebi, wdg, iji gbochie cylinder, valvụ ihe ọjọọ. njikọ anwụrụ kwesịrị n'ụzọ zuru ezu blown na saa ...
Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd. a raara nye nnyocha, mmepe, mmepụta na ahịa nke YSC ika ulo oru akpaaka oru ngo na afọ. Na mgbe nile mgba site anyị ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ, YSC ngwaahịa na-eresị n'ụwa nile. Na ya pụtara ìhè qua ...